Waa maxay Barnaamijka Pilot Cannabis ee Kuleejooyinka Bulshada ee ku yaal Illinois?
Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Barnaamijka Pilot Cannabis ee Kuleejooyinka ee Jaamicadda dhexdeeda
The Barnaamijka Mashiinada Xannaanada Xannaanada ee Kulliyadaha Bulshada gudaha Illinois waxaa loogu talagalay in la tababaro khabiiro ku maarayn doona warshadaha cannabis mustaqbalka. Kulliyadda bulshada ee kiiskan macnaheedu waa wax kasta oo kulleejo bulsheed oo dawli ah.
Si loo helo sharciga xashiishadda Illinois si guul leh loogu dhaqmo, waxaa loo baahan yahay in la tababaro dadka ka shaqeyn doona warshadaha. Dadkani kaliya laguma tababari doono sharciga, laakiin sidoo kale waxaa lagu hagi doonaa sida loo maareeyo shirkadaha cannabis.
Waaxda Beeraha ayaa mas'uul ka noqon doonta maamulka barnaamijka tijaabinta cannabis ee kulleejada bulshada ee gobolka Illinois. Waqtiga sharcigu dhaqangalayo Janaayo 2020, waaxda beeraha waxay ujeedadeedu tahay inay liisan siiso ugu yaraan 8 barnaamijyada kuliyadaha bulshada ee gobolka gudeheeda ah.
Marka la gaaro 2021, kulleejooyinka horey u lahaan lahaa shati ay ku bixiyaan barnaamijka cannabis ayaa loo oggolaan doonaa inay bilaabaan tababarka ardayda xiiseyneysa. Ujeedada halkan waa in loo diyaariyo ardayda inay galaan warshadaha xashiishadda. Tababarku wuxuu diiradda saari doonaa labadaba ganacsiga iyo waxqabadka xirfadeed, iyo sidoo kale arrimaha sharciga ee ciyaartooyda warshadaha ay noqon doonaan kuwa aqoon u leh.
Maaha in qof walba loo oggolaado inuu sameeyo barnaamijka xashiishadda. Kaqeybgale kastaa wuxuu ubaahanyahay ugu yaraan 18 sano jir si uu uguqoro tababarkaan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jiri doona shahaadooyin ay bixiyaan kulliyadaha bulshada shaqsiyaadka ku guuleysta tababar ku saabsan sida loo maareeyo ganacsiyada xashiishadda.
Bixinta Shatiyada Barnaamijka Awoodaha Xannaanada Xannanada Kuliyadaha Bulshada
Ruqsadaha ayaa la bixin doonaa laga bilaabo sanadka 2020. Dhammaan kulliyadaha daneynaya inay bixiyaan koorsadan waxaa laga rabaa inay u soo gudbiyaan codsiyadooda liisanka illaa Luulyo 1 2020. Ruqsadaha waxaa lagu bixin doonaa mudnaansho, waaxda beeraha ayaa loo xilsaari doonaa masuuliyada la imaanshaha nidaam lagu kala garto codsadayaasha ruqsad siinta. Waxyaabaha qaarkood ee laga tashan doono waxaa ka mid ah:
Kala duwanaanshaha juqraafiyeed
Nadiifi qorshaha manhajka
Khibrad kuliyadeed ee marijuana iyo beeraha laxiriirta
5 kamid ah shatiyadaha ayaa la siin doonaa xarumaha ay ku nool yihiin ardayda wax kabarta 50% ardayda dakhligoodu hooseeyo
Tallaabooyin amni ayaa la dhigay si loo hubiyo in dhirta iyo alaabada xashiishadda aysan ku dhicin gacanta qaldan.
Qorshaha meelaynta ee ardayda si guul leh ugu gudba barnaamijka
Shuruudaha Barnaamijka tijaabada Xannaanada Xannaanada Bulshada ee Kuliyadaha Bulshada
Hay'adaha oggolaanaya inay maamulaan barnaamijka tijaabada ah waxaa looga baahan doonaa inay raacaan xeerarka qaarkood. Marka hore, machadku looma ogolaan doono in ka badan 50 geedaha xashiishadda canabka xilliga ubax kasta waqti kasta. Dhirta ama wax soo saarkeeda midkoodna lagama wareejin doono hay'addu haddii aan sanballada loo qaadin shaybaarka. Intaa waxaa sii dheer, kulliyadda waa in ay magacawdaa wakiil wakiila keydka hiddaha ee dadka gala xarunta xashiishadda. Shuruudaha kale waxaa ka mid ah:
Gaaritaanka aagga soo koraya marijuana wuu xadidi doonaa. Manhajka waxaa heli doona oo keliya kuwa qaadaya koorsada xashiishadda
Shirkad gaadiid qaada waa in lagu wareejiyaa in ay ku soo qaado alaabada xashiishadda kanaanta kuliyada bulshada ilaa shaybaarka.
Dhamaan alaabada xashiishadda ee aan ku dhicin sheybaarka waa in lagu baabi'iyaa 5 usbuuc kadib goosashada.
Wakiilka kuliyadu waa inuu joogi karaa xarunta cannabis markasta oo ardaygu jiro. Sharcigu wuxuu dhigayaa in, "Arday kasta oo kaqeybqaata manhajka xashiishadda cannabis ee lagama maarmaanka u ah inuu helo shahaado kuma jiri karo xarunta liisanka shatiga haddii wakiil wakiil oo kalkaaliye ah sidoo kale aan jir ahaan laga heli karin. ''
Baaritaanno iyo Baadhitaanno Random ee Booliis
Beeraha iyo waaxda booliiska gobolka ayaa xaq u leh inay baaritaano aan kala sooc lahayn ku sameeyaan xarumaha. Jeegaga aan kala sooca lahayn ayaa lagu xadidi doonaa oo keliya meelaha ay xaruunta cannabis ku yaalliin.
Sida loo Helo Kaarka Aqoonsiga Wakiilada
Qofku waa inuu soo gudbiyaa arjiga oo uu bixiyo lacag aan laga soo celin karin oo la siinayo kaarka aqoonsiga wakiilka kuliyada. Kaarka wuxuu sidoo kale u baahan doonaa in dib loo cusbooneysiyo waqtiyada dhexdooda. Shakhsiga ayaa ogaan doona in kaarkooda la oggolaaday ama la diiday 30 maalmood gudahood ka dib marka la soo gudbiyo codsigooda. Waxaa muhiim ah in la ogaado in dhammaan dukumiintiyada quseeya ay u baahan yihiin in la soo gudbiyo si dalabka loo maro.
Marka codsiga la oggolaado, codsaduhu wuxuu heli doonaa kaarka aqoonsiga wakiilka muddo 15 maalmood gudahood ah laga bilaabo taariikhda oggolaanshaha. Wakiilka waxaa looga baahan doonaa inuu markasta kaarka muujiyo illaa iyo inta ay ku jiraan xarun xiran, "Ama tasiilaadka ay isaga ama iyada wakiil u yihiin."
Macluumaadka ku jira kaarka aqoonsiga waxaa ku jira:
Taariikhda kaarka la soo saaray
Taariikhda uu dhacayo kaarka
Lambarka aqoonsiga alifbeetiga. Lambarkan wuxuu ka koobnaan doonaa 10 lambar oo leh ugu yaraan 4 xaraf iyo 4 lambar
Sawirka qofka sita kaarka
Magaca kulleejooyinka bulshada ee kaarka haysta
Maxaa dhacaya haddii sharciga la jebiyo?
Waaxda beeraha waxay xaq u leedahay inay kala noqoto kaarka wakiilka kuliyadu hadii aysan u hogaansamin shuruucda ku xusan sharciga cannabis. Shatiga barnaamijka sidoo kale waa lagala noqon karaa haddii uu ku xadgudbo mid ka mid ah qodobbada sharcigan. Sharcigu wuxuu kaloo leeyahay, “Guddigu waxay kala noqon doonaan awoodda ay u siinayaan shahaadada kulliyadda bulshada ee ay liisanka ka rogtay waaxdeeda”
Warbixinta horukaca ee ku saabsan howlaha barnaamijka tijaabada ah
Sida uu qabo sharciga Illinois, "Marka la gaaro Disembar 31, 2025, Sarkaalka Kormeeraha Xannaanada ee Cannabis, isagoo la shaqeynaya Guddiga, waa inuu warbixin u soo gudbiyaa Guddoomiyaha iyo Golaha Guud". Waxyaabaha ka mid ah warbixintan ayaa noqon doona:
Dhacdooyinka amniga ayaa ka markhaati kacay dhammaan xarumaha shatiyeysan. Sidoo kale waa inay lahaadaan faahfaahin kufilan talaabooyinka laga qaaday xarumaha ay dhacdooyinka ka diiwaan gashan yihiin.
Tirakoobka ardayda ku diiwaangashan barnaamij kasta oo laxiriira xashiishadda. Tirakoobyadan waa in lagu saleeyaa lab iyo dheddig, qowmiyadeed, iyo kuliyadda bulshada.
Tirada ardayda si guul leh u dhammaystirtay barnaamijka xashiishadda ee machadyada shatiga leh ee kala duwan
Tirakoobka shaqada meelaynta ee ardayda marka la dhammaystiro barnaamijyada
Haddii aad xiisaynayso inaad ka mid noqoto Barnaamijka Kulliyadaha Xannaanada Cannabis ee Kuleejooyinka ee ku yaal Illinois, waa inaad la hadasho qareen khibrad leh oo kaa caawin doona inaad fahamto shuruudaha looga baahan yahay sida sharciga waafaqsan oo kugu hagaya habka dalabka.